NISA oo sheegtay hawlgalkii Awdheegle in lagu bur buriyay goob... | Universal Somali TV
NISA oo sheegtay hawlgalkii Awdheegle in lagu bur buriyay goob Shabaab qaraxyo ku diyaarinayeen
Kadib markii xalay weerar qorsheysan ciidamada Somalida & kuwa Ajaanibta ay ka fuliyeen deegaanka Awdheegle ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa Hay’adda Nabad Suggida Somaliya waxa ay sheegtay in hawlgalkaasi lagu bur buriyay goob qaraxyo Shabaab ay ku diyaarinayeen.
War ka soo baxay Hay’adda Nabad Suggida Somaliya ayaa lagu sheegay ciidamada inay fuliyeen hawlgalkaasi si qorsheysana oo taxadar lehna uu u dhacay, waxaana la beegsaday goob Shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo sida hadalka NISA ay ku sheegtay.
“Hawlgal ciidanka Amnigu xalay ka fuliyay xarun ay Alshabab ku lahayd tuulada Awdheegle, ayaa lagu soo qabtay walxaha qarxa oo loo diyaariyay in lagu dhibaateeyo shacabka. Ciidanka Amniga ayaa naftooda u hura badbaadada shacabka.”Ayaa lagu yiri War ka soo baxay NISA.
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha hoose Maxamed Ibraahin Barre, ayaa dhankiisa sheegay ciidamada ammaanka inay weerareen Awdheegle oo gacanta ku hayaan Shabaab, lana beegsaday goob ay ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa oo la bur buriyay.
“Hawlgal qorsheysan ayaa ka dhacay deegaanka Awdheegle, waxaana xarunta lala beegsaday Weerarkaasi Argagaxisada ay ku diyaarinayeen Walxaha qarxa, waana la burburiyay guud ahaan goobtii howlgalka qorsheysan lagu qaaday si guul ayuu kusoo dhamaaday, Maleeshiyaad badan ayaana goobta lagu laayay.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha hoose.
Al Shabaab oo ka hadlay weerarkaan, waxa ay sheegteen inay fashiliyeen qorshe ciidamada Mareykanka & kuwa Baangaraafta ay ku doonayeen inay ku weerareen Awdheegle, dagaalna ay kala hortageen arrintaasi.
Kan-xigaXildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo...
Kan-horeMuwaadin Somaliyed oo lagu maxkamadey...
45,296,669 unique visits